Wokuzilibazisa, Ukubuka izinyoni
Nethange kusukela zisencane kuyinto umdlalo wami ozithandayo. Ngiyakhumbula ukuthi mina waklonyeliswa nge lokuqala aquarium ingcula gupikami khona - Ngajabula ngayo yonke inhliziyo yami. Okuphawuleka Nokho, njengoba evuthwa uthando aquarium alukapheli, kunalokho, uye waqina ngokwengeziwe. Ngakho-ke, lapha ngingathanda ukuxoxa omunye okuvelele okuqukethwe izitshalo aquarium - izindlela ukuthi zalisa inhlabathi. Umsuka yokudla izitshalo emanzini , isimiso, Umkhuba omusha e aquarium samanje, nakuba kanye aquarists ukukwenza (ezingeni amateur, vele) efana Umanyolo zalisa aquarium.
Uma izimpahla zidayiswa ne micro Isiqalo Ngakho-ke, kukhona vumelekile izakhiwo. Florastim esihluke Macro kusukela izinguqulo kushiwo ngaphambili phambi macronutrients kudingekile povodnoy flora ngoba intuthuko eqhubekayo.
Ukuze usebenzise lemali egcwele izakhi mkhondo, kubalulekile futhi ukuthatha potassium ngoba izinto ezimila emanzini. Le ngxenye liyadingeka izitshalo abasha omdala. Esikhathini sokukhula asebenzayo futhi elikhulu aquarium yobudala flora kudingeka ehlelekile ashona potassium.
Endaweni ehlukile, ungakwazi ukhumbule aquarium Umanyolo ngensimbi, isihloko okuyinto izinsika ecacile. Ngenxa yokuba khona amafomu divalent yensimbi, kungenzeka ukuthuthukisa ukuthuthukiswa umbala uhlaza. yensimbi eziyinkimbinkimbi uvezwa namuhla njengoba tablet futhi uketshezi. Iron amaphilisi Florastim Ngithande kalula kokudla nokufakwa. Omunye ithebhulethi wangcwatshwa eduze izimpande - futhi kukhona asikho isidingo kokukhathazeka ngempilo abizayo izinhlobo.
Lapha sitjelwa mayelana izinhlobo ezinkulu Umanyolo Florastim. Wena bayoba anele ukuba silondoloze izitshalo zisesimweni esihle. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ukusetshenziswa kwabo akuvumelani ukulimaza inhlanzi kanye nezinye izakhamuzi zaseMpumalanga imvelo aquarium ngokuphambene inikeza izakhi ewusizo.
Aquariums kusukela zisencane kukhona umdlalo wami ozithandayo. Ngiyakhumbula ngesikhathi ufake aquarium encane nge sihamba ke guppies - Ngajabula ngayo yonke inhliziyo yami. Ngokumangalisayo, kancane kancane uthando okugcinwa kuhlulekile, ke uye waqina ngokwengeziwe ngisho. Kodwa-ke ngingathanda ukuxoxa omunye nezici eziyinhloko kwamanzi flora okuqukethwe - izindlela avundisa umhlabathi. Umquba amaphilisi emisha, ngisho nakanye Uzame ukudala i (indlela amateur, vele) umquba ekhethekile.
Ngakho lokho aquarium isitshalo Umanyolo mathupha Ngithanda ukusho? Ngicabanga uyoyinikela Ukubuyekeza kwami umakhi izimpahla zethu, muva nje ahlanganiswe uhla yayo fertilizer. Phakathi eyinhloko, ngingathanda sibala i Micronutrient ukuze aquarium - Umanyolo ekhethekile equkethe isethi wayefisa izakhi mkhondo ngesimo chelates. Uma umquba zidayiswa ne micro Isiqalo, ngokulandelana, kumele lithengiswe fertilizer Macro. Macro Florastim zingabi isihumusho khona macronutrients kudingwa izitshalo aquarium ekuthuthukiseni enempilo.
Enye inothi Florastim Hardware for aquarium, kahle, ke iminonjana enkulu umthelela. Ngenxa okuqukethwe yensimbi ayoni, kungenzeka ukuthuthukisa umbala kanye nokuthuthukiswa izitshalo. Umanyolo nensimbi kudayiselwa usuku ngalolu hlobo okusamanzi kanye amaphilisi. amaphilisi Iron Florastim kalula elula nokushintsha kokudla nokufakwa. Buried ngaphansi ithebhulethi impande - futhi ungakwazi ungakhathazeki mayelana nesimo se-ayithemu high-priced.
Ukumboza wonke nomkhakha we izakhi ewusizo udinga ukuthenga Florastim potassium. Lokhu amaminerali trace kuyadingeka abadala futhi izitshalo ezincane. Phakathi ukuthuthukiswa olunzulu, kanye nokuvuthwa sokugcina izitshalo kwamanzi kudingeka efaka umquba potassium ehlelekile.
Lapha sishilo mayelana izinhlobo ezinkulu Umanyolo Florastim. Ekuqaleni, la magama kuyoba anele ukuba silondoloze izitshalo zisesimweni esihle. Kubalulekile ukugcizelela - ukusetshenziswa umquba akakwazi balimaze izakhamuzi aquarium, ngakolunye uhlangothi, ikuvumela ukuba uthole amandla.
Nikolaev amajuba - izinyoni ukuthi siyigugu emhlabeni wonke
Isithwathwa imbulunga ngezandla zakhe: indlela wenze isipho awesome
Indlela yokwenza ukuwa yezandla enkulisa?
Kanjani ukwenza ukulungiswa ngokwakho? Kanjani ukwenza ukulungiswa emotweni?
Indlela uyasinda ekufeni indoda yakhe isekhona ngendlela entsha
Izici eziyinhloko umdlalo "Operation Silent Storm"